Mabda'a shaqada ee qalabka wax lagu buufiyo
Mabda'a shaqada ee qalabka wax lagu afuufo
Mabda'a shaqada ee qalabka afuufa waxay la mid tahay tan hawo-mareenka centrifugal, laakiin habka riixitaanka hawada waxaa badanaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo dhowr shucuur oo shaqeynaya (ama dhowr heerar oo） ah iyadoo la adeegsanayo xoogga xoogagga bartamaha. Afuufuhu wuxuu leeyahay rotor ku wareega xawaare sare. rotorku wuxuu wadaa hawo si uu ugu dhaqaaqo xawaare sare.Ururka bartamaha ayaa ka dhigaya hawada qulqulka marinka marawaxada iyadoo la raacayo xariijinta qafiska ee shandada oo leh qaabka qafiska. Hawo nadiif ah ayaa dib loo buuxiyaa iyadoo la galayo xarunta guriga .
Mabda'a shaqeynaya ee mashiinka xawaaraha sare xawaaraha sare ee heerka sare waa: mashiinka xawaaraha xawaaraha sare ee xawaaraha si uu u kaxeeyo qalabka wax lagu duubo, qulqulka qulqulka hawada ee soo dejinta ka dib markii la galo xawaaraha sare ee wareejinta qulqulka qulqulka qulqulka ayaa la dedejinayaa, ka dibna wuxuu galayaa cadaadiska ballaarinta saabka, isbeddelka socodka jihada iyo yareynta, saameynta dhimista waxay ku jiri doontaa xawaaraha sare ee qulqulka hawada oo leh tamar firfircoon tamar cadaadis (tamar macquul ah), ka dhig fanku inuu dhoofiyo cadaadis deggan.
Aragti ahaan hadalkayga, cadaadiska-socodka qalooca dabeecadda qalabka afuufa waa xariiq toosan, laakiin sababo la xiriira iska caabinta khilaafaadka iyo qasaarooyinka kale ee ka jira gudaha taageereha, cadaadiska dhabta ah iyo qalooca dabeecadda socodka ayaa si tartiib ah u yaraanaya kororka qulqulka, iyo qalooca awoodda-socodka qulqulka taageere centrifugalwaxay ku kacdaa kororka qulqulka. Marka marawaxaddu ku socoto xawaare joogto ah, barta shaqada ee taageere ayaa ku sii socon doonta qalooca astaamaha astaamaha cadaadiska-socodka. Barta hawlgalka ee taageere kuma xirna oo keliya waxqabadkeeda, laakiin sidoo kale astaamaha nidaamka. Marka iska caabinta shabakadda tuubbada ay kororto, qalooca waxqabadka dhuumaha ayaa noqonaya mid hooseeya.
Mabda'a aasaasiga ah ee taageere qawaaniintu waa in la helo shuruudaha shaqada ee loo baahan yahay iyadoo la beddelayo qalooca waxqabadka ee taageere laftiisa ama qalooca dabeecadda ee shabakadda tuubbada dibadda.Iyadoo horumarka joogtada ah ee sayniska iyo tikniyoolajiyadda, tiknoolajiyada xakamaynta xawaaraha gawaarida AC ayaa si ballaaran loo isticmaalaa. Iyadoo loo marayo jiilka cusub ee qalabka elektaroonigga ah ee si buuxda loo kontoroolo, socodka marawaxadda waxaa lagu xakamayn karaa iyadoo la beddelayo xawaaraha mootada AC oo ay la socoto beddelka soo noqnoqda, taas oo si weyn u yareyn karta luminta tamarta ee ay sababtay qaabkii hore ee farsamo ee xakamaynta socodka.
Mabda'a keydinta tamarta ee sharciyeynta soo noqnoqoshada:
Marka mugga hawadu u baahan yahay in laga dhimo Q1 illaa Q2, haddii habka qawaaniinta ceejinta la qaato, barta shaqadu waxay ka beddelaysaa A ilaa B, cadaadiska dabayshu wuxuu u kordhayaa H2, awoodda mashiinka P2 ayaa hoos u dhacaysa, laakiin aan aad u badnayn. Haddii qawaaniinta is-beddelka soo noqnoqda la qaato, barta shaqada ee taageereyaashu waa A illaa C. Waa la arki karaa iyadoo la raacayo haddii isla qaddarka hawada Q2 uu ku qanco, cadaadiska dabaysha H3 si weyn ayuu u yaraan doonaa oo awoodda ayaa la dhimi doonaa
P3 si weyn ayaa loo dhimay. Dhimista korantada saved P = △ Hq2 waxay u dhigantaa aagga BH2H3c. Falanqaynta kore, waxaan ku ogaan karnaa in sharciyeynta soo noqnoqoshada soo noqnoqoshada ay tahay hab wax ku ool ah oo sharciyeyn ah. Afuufuhu wuxuu qaataa sharciyeynta isbeddelka soo noqnoqda, ma soo saari doono cadaadis dheeri ah oo saa'id ah, saameynta keydinta tamarta waa mid la yaab leh, hagaaji xaddiga mugga hawada ee 0% ~ ~ ~ 100%, oo ku habboon xeerar ballaaran oo kala duwan, iyo inta badan xilliyada hawlgalka culeyska yar. Si kastaba ha noqotee, marka xawaaraha marawaxaddu hoos u dhacdo oo mugga hawadu hoos u dhacdo, cadaadiska dabaysha ayaa si weyn isu beddeli doona. Sharciga saami ahaanta ee taageere waa sida soo socota: Q1 / Q2 = (N1 / N2), H1 / H2 = (N1 / N2) 2, P1 / P2 = (N1 / N2) 3
Waa la arki karaa in marka xawaaraha loo yareeyo kala badh xawaaraha asalka ah ee la qiimeeyay, heerka socodka, cadaadiska iyo awooda usheeda dhexe ee dhibcaha xaalada shaqo ee u dhiganta ayaa hoos ugu dhacaya 1/2, 1/4 iyo 1/8 asalka, taas oo waa sababta sababta qawaaniinta is-beddelka soo noqnoqda ay si weyn u badbaadin karto korantada. Marka loo eego astaamaha qawaaniinta beddelaadda soo noqnoqoshada, habka daaweynta bullaacadaha, haanta hawadu had iyo jeer waxay haysaa heerka dareeraha caadiga ah ee 5m, afuufayaashana waxaa looga baahan yahay inuu sameeyo nidaam ballaaran oo socodka socodka hoos yimaada xaaladda cadaadiska joogtada ah ee marinka. Marka qoto dheerida hagaajintu ay weyntahay, cadaadiska dabayshu aad ayuu hoos ugu dhici doonaa, taas oo aan buuxin karin shuruudaha nidaamka. Marka qoto-dheerida hagaajintu ay yar tahay, ma muujin karto faa iidooyinka keydinta tamarta, laakiin qalabka ayay ka dhigeysaa mid isku dhafan, maalgashiga hal-mar ayaa kordhay. Sidaa darteed, iyadoo la raacayo shuruud ah in haanta hawadu ee mashruucani u baahan tahay inay ilaaliso heerka dareeraha ee 5m, waa iska cadahay inaysan ku habboonayn in la qaato qaabka xakamaynta soo noqnoqoshada.
Qalabka hagidda hagaha tubbada tubbada waxaa lagu qalabeeyaa gogol hagayaal xagal hagayaal ah iyo hagidda tubbada tubbada ee u dhow irbadda afuufa. Doorkeedu waa inay ka dhigto qulqulka hawadu isku bedbedelka kahor intaanuu galin qalfoofka, taasoo keenta xawaaraha qallooca. Mashiinka hagaha waxaa lagu wareejin karaa geeskiisa. Xaglo-wareeg kasta oo ka mid ah daabku wuxuu ka dhigan yahay beddelidda aaladda hagida rakibidda daabkeeda, si jihada socodka hawadu u soo gasho mashiinka hawo-qaaduhu u beddelo si waafaqsan.
Markay rakibida daab daabku xagal 0 = 0 °, daabku hagaha asal ahaan wax saameyn ah kuma laha qulqulka hawada, qulqulka hawaduna wuxuu ku qulqulayaa daabku qaab shucaac leh. Markay tahay 0 BBB 0 °, tubbada hagidda tubbada ayaa xawaare dhammaystiran ka dhigi doonta qulqulka hawo-qaadashada О Xagasha iyadoo la raacayo jihada wareegga wareegga, isla mar ahaantaana, waxay ku leedahay saameyn duufaan gaar ah xawaaraha marinka hawada. Saameyntan horay-u-rogista iyo ruxruxintu waxay horseedi doontaa hoos u dhaca qalooca waxqabadka taageerayaasha, si markaa loo beddelo xaaladaha hawlgalka, loona ogaado qawaaniinta qulqulka socodka. Mabda'a keydinta tamarta ee hagidda marinka hagista hagida.
Isbarbardhiga qaabab kala duwan oo sharciyeyn ah
Inkasta oo isbeddelka isbeddelka isbeddelka isbeddelka isbeddelka isbeddelka ee bartamaha dhexe uu aad u ballaaran yahay, saameyn weyn ayuu ku leeyahay keydinta tamarta, laakiin nidaamka hannaanka ayaa ku xaddidan xaaladaha nidaamka, qiyaasta hagaajinta waa kaliya 80% ~ 100%, heerka socodka qaraabada ayaa wax yar beddelay, hababka hagaajinta soo noqnoqoshada soo noqnoqda iyo tilmaamaha haga laba nooc ee awoodda la wada cunay ma weyna, sidaa darteed qaabka xakamaynta inverter, keydinta tamarta ayaa si gaar ah u muujineysa inaysan soo bixin, waxay lumineysaa doorashada macnaheeda. Afuufaha oo leh qaabka hagida hagaha hagaha ayaa habeyn kara mugga hawo (50% ~ 100%) baaxad weyn iyadoo hoos loo dhigayo joogteynta cadaadiska marinka, si loo hubiyo in xasiloonida oksijiin kala daadsan bulaacada iyo keydinta tamarta qiyaas ahaan. Sidaa darteed, taageere-dhaqameedka xawaaraha sare ee nidaamka hagidda vane waa in loo xusho xulashada qalabka mashruucan. Isla mar ahaantaana, si ay sifiican uga tarjumto saameynta keydinta tamarta, ee taageere awood sare leh, waa in sidoo kale fiiro gaar ah loo yeesho xulashada matoorka taageera, sida isticmaalka 10kV matoor danab sare leh, sidoo kale gacan ka geysanaya yareynta isticmaalka tamarta .